Yandisa iTrafiki ngokwandisa iiXesha lokuPapasha | Martech Zone
Njengoko saqhubeka sisebenza ukuya yandisa ukugcwala kwabantu kunyaka ophelileyo, enye yeendawo esizijongileyo yayilixesha losuku esasipapasha ngalo iibhlog zethu. Impazamo eyenziwa ngabantu abaninzi kukujonga nje ukugcwala kwabo ngeyure kwaye bayisebenzise njengesikhokelo.
Ingxaki kukuba ukujonga ukugcwala ngeyure kweyakho kubahlalutyi ibonisa kuphela ukugcwala kwindawo yakho yexesha, kwaye hayi ummandla wombukeli. Xa saqhekeza ukugcwala kwethu ngexesha lendawo, safumanisa ukuba eyona spike yethu ibalulekileyo kwitrafikhi yayiyinto yokuqala ekuseni. Ngenxa yoko, ukuba sipapasha nge-9AM EST, sesifikile kade. Ukuba uyindawo okanye ibhlog yakho ikumbindi, iPacific okanye amanye amaxesha emimandla… uya kufuna ukucwangcisa iposti ukuze ibethe nge-7: 30 AM ukuya kwi-8AM EST ukuqhuba ezona zithuthi zininzi kunye nokwabelana noluntu.
Ngokunjalo, njengoko sijonge ukupapasha iposti emva kwemini, kufuneka siqinisekise ukuba asiyenzi emva kwentsimbi yesi-5PM, kungenjalo abantu abaninzi abayi kuyibona loo nto de kube lusuku olulandelayo. Ukuba besizakupapasha izithuba ezi-3 ngosuku, singafuna ukuzipapasha kwangoko kunokuba kamva siveze umxholo wethu. Ukuba ukwindawo yexesha lePacific, uya kufuna ukupapasha phakathi kwe-4: 30 AM PST kunye ne-2PM PST! Ke… ufunda ngcono ukuba ungazicwangcisa njani izithuba ngaphandle kokuba ufuna ukuphulukana nokulala!
Okt 17, 2011 ngexesha 9:33 AM
Umxhasi mva nje ubuze ukuba leliphi elona xesha lilungileyo lokwabelana ngomxholo. Ngumbuzo omkhulu kwaye ngokwenene unokwahluka ngokuxhomekeke kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Ukuba ujongana nesihlwele sasekholejini, bajonga iwebhu ngamaxesha ahlukeneyo kune-9-5'ers. Ukubheja kwakho kukwenza uvavanyo oluthile ukuze ufumanise ukuba yintoni esebenza ngcono.
Okt 17, 2011 ngexesha 10:29 AM
UNick – unyanisile ngokupheleleyo. Kuxhomekeke ngokupheleleyo kubaphulaphuli! Ndibona nje abanye abantu bengahoyi ixesha lendawo kwaye bengaqondi ukuba kukho ukonakala kwetrafikhi njengoko sisuka kwindawo ukuya kwindawo.
Okt 17, 2011 ngexesha 10:46 AM
Isihloko esikhulu kwaye sihambelana noko sikubonayo. Uthunyelwa ngcono ukuba uthumele phambi kwetrafikhi yemihla ngemihla kunangexesha.
Oktobha 17, 2011 ngo-9: 49 PM
Ndiyibonile i-eagement engcono eyenzekayo kusasa. ukuba ndicwangcisa iitweets zam okanye uhlaziyo lwe-facebook kwishishini lam okanye abathengi bam. Enkosi ngokwabelana ngale Doug.